ट्विटरका प्रयोगकर्तामा कीर्तिमानी वृद्धि, तर किन घट्यो आम्दानी ? – Dullu Khabar
काेराेना अपडेट कर्णाली प्रदेश दैलेख काेराेना कहर सडक दुर्घटना काेराेना भाइरस नेपाल भ्रमण वर्ष दैलेखमा काेराेना कहर !
ट्विटरका प्रयोगकर्तामा कीर्तिमानी वृद्धि, तर किन घट्यो आम्दानी ?
१० श्रावण २०७७
माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरका प्रयोगकर्ताको संख्यामा ऐतिहासिक बढोत्तरी देखिएको छ । ट्विटरले बिहीबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्यामा कीर्तिमानी वार्षिक वृद्धि हासिल भएको हो ।
ट्विटर प्रयोगकर्ताको वृद्धिदरले विश्लेषकहरुको अनुमानलाई उछिनेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै ट्विटर कम्पनीको शेयर मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । बिहीबार ट्विटरको शेयर मूल्यमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो रिपोर्टअनुसार ट्विटरका मनिटाइजेबल दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा ३४ प्रतिशतले वद्धि भई १८ करोड ६० लाख पुगेको छ ।
मनिटाइजेबल एक्टिभ युजर्स भनेको त्यस्ता सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या हो जसले आफ्नो वालमा विज्ञापन देख्दछन् ।
विश्लेषकहरुले यस अवधिमा ट्विटरका दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या १७ करोड ६० लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
ट्विटरका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्यामा कीर्तिमानी बढोत्तरी हुनुमा विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीको लकडाउनका कारण मानिसहरु घरभित्रै रहन बाध्य हुनु र सोसल मिडियाको अत्यधिक प्रयोग गर्नुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
प्रयोगकर्ताको संख्यामा कीर्तिमानी वृद्धिदर हासिल गरे पनि ट्विटरको आम्दानीचाहिँ अपेक्षाकृत हुन सकेन । कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दीसँगै डिजिटल विज्ञापन व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ट्विटरको आम्दानीमा गम्भीर असर परेको बताइएको छ ।
ट्विटरको कूल आम्दानीको ८२ प्रतिशत हिस्सा डिजिटल विज्ञापनबाट आउने गर्दछ । विज्ञापनबाट हुने आम्दानी २३ प्रतिशतले घटेर ५६ करोड २० लाख डलरमा झरेको छ ।
ट्विटरको विज्ञापन आयमा कमी आउनुमा कोरोना भाइरस महामारीसँगै विभिन्न चर्चित ब्राण्डहरुले रेसिजमको विरोध गर्दै सोसल मिडियामा विज्ञापन दिन बन्द गर्नु पनि प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा ट्विटरको कुल आम्दानी ६८ करोड ३० लाख डलर रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको वार्षिक आम्दानीभन्दा १९ प्रतिशतले कम हो ।
समग्रमा सन् २०२० को दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा ट्विटर कम्पनीले कुल १२ करोड ७० लाख डलर घाटा व्यहोरेको छ । गत वर्र्ष यहीँ अवधिमा ट्विटरले ३ करोड ७० लाख डलर मुनाफा कमाएको थियो ।
मेलम्चीमा पहिरो, ८ जनाकाे शव भेटियो
एक सातादेखिको कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
बाँकेमा आजदेखि तीन दिन निषेधाज्ञा
नगरको सिफारिस र स्वीकृति बिनै संस्था छनौट गरी ४६ लाख भुक्तानी
गाउँ-नगरकाे समृद्धिमा युवाकाे भुमिका आवश्यक : नेता याेगी
प्रदेश पोष्ट साप्ताहिक २०७७।४।२० गतेकाे अंक
प्रकाशक - शेरबहादुर शाही
सम्पादक - इश्वर राज भण्डारी
कार्यकारी सम्पादक - नविन शाही
प्रबन्धक -सुवर्ण शाही
सुचना बिभाग दर्ता नं. ६७०/०७४-०७५